Binance Coin (BNB): Chiratidzo chechizvarwa chekutsinhana kukuru kwepasirose pasi - Cazoo
Binance Coin (BNB): Chiratidzo chechizvarwa chekutsinhana kukuru kwe crypto munyika
musha » musha » Binance Coin (BNB): Chiratidzo chechizvarwa chekutsinhana kukuru kwe crypto munyika
Tag: BEP, Binance, binance coin, Binance DEX, Binance Evolution Pfungwa, Binance Launchpad, Blockchain, BNB, BNB Mari Inopisa, DEX, Launchpad, Stablecoin fiat
Nguva yekuverenga: 10 minuti
Binance iri kutungamira nzira kumativi mazhinji. Pamusoro pekuwedzera kwavo kwemusika, ivo vakawedzerawo kuvandudzwa kweprotocol nekuunzwa yavo yemuno Binance mari, BNB Binance Coin, mune ikozvino tekinoroji iri kure.
Chii chinonzi Binance Coin?
Binance Coin (BNB) zvinhu zvakawanda. Chiratidzo chekushandisa chinoshandiswa kutengesa mari yemadhora, chirongwa chekuvandudza kugadzira dApp uye kuburitsa ma tokeni, "mubairo" mari inokurudzira ese HODL (akabata crypto asina kuitengesa) uye kunyange kuitengesa. Kubvumirwa paBNB kuri kukura pamwero wakaenzana neiyo Shanduko pachayo.
Pane here mukana wekuti kukura uku kuchaderera uye BNB ichava chiratidzo chekushandisa kushoma? Mune ino Binance mari yekuongorora chinyorwa ini ndichaedza kukudzidzisa nezvazvo. Tichatarisawo iyo BNB yenguva refu-yemitengo mikana uye tarisiro yekukura.
Chii chinonzi Binance?
Chii chinonzi Binance Coin (BNB)?
Iyo Binance Blockchain
BNB inoshanda sei?
BNB Mari Inopisa
BNB mutengo wenhoroondo
Kutengesa nekubata (kuchengetedza) kweBNB
Kubudirira kweBinance Chain
Zvirongwa zvenguva yemberi yeBinance Coin
Tisati tagona kukupa iwe pfungwa yeiyo iyo Binance mari, ngatikurumidze titarise iyo Shanduko kubva kwayakapihwa. Binance parizvino ndiyo hukuru hwekutsinhana kwemari yedhijitari pasi, iine huwandu hwekutengesa hunenge $ 1 bhiriyoni zuva rega rega. Kana isu tichifunga kuti yakazvarwa chete pakati pa2017 .. musi wa14 Chikunguru 2017 kunyatsoita. Unosaina kuBinance mahara, uye iwe unogona kuzviita kubva pane iyi link kutora iyo 20% kuderedzwa pamakomisheni, nekusingaperi.
Binance Coins (Binance Coin) ndiwo marokheni anoshandiswa papuratifomu yeBinance, saka kunyangwe hazvo achitengeswa pamusika uye kukosha kwavo kuchichinja, ivo patsika izvo munhu angafunga senge chero mari, senge Euro kana Bitcoin. Kushandiswa kwaro kunochinja-chinja, hazvisi netsaona kuti mutengo waro unoramba uchiwedzera.
Kwayaka: Binance Blog
Binance Coin ndomumwe wevakawanda ari Altcom, uye payakagadzirwa yaive yakavakirwa pane iyo ERC-20 standard, uchishandisa iyo Ethereum network uye yayo blockchain. Inofanira kuyeukwa, nekuti zvinoreva kuti mari yacho zvakare inoteedzera iyo mirawo yakatarwa nenharaunda kudzora Ethereum blockchain. Zvinotonyanya kukosha, zvakadaro, inobvumira Binance Coin kubatsirwa kubva ku kugadzikana uye kuchengetedzeka iyo blockchain uye Ethereum network yakagadzira nekufamba kwenguva. Iwe haufanire kunetsekana nemari yako yekubiwa mune kumwe kurwisa nekuti inodzivirirwa, ichivakwa paEthereum.
Zvese zvakashanduka muna Kubvumbi 2019, apo Binance yakatamisa BNB kune yayo yega mainnet. Panguva iyoyo, ivo vakapisawo mamirioni mashanu ERC-5 BNB tokeni uye ndokupa yakaringana huwandu hweBEP-20 yemuno BNB tokeni kune avo mawallet.
Kare ikako Binance yaikurudzira vashandisi vayo kushandura yavo BNB ERC-20 tokeni kuva echizvarwa BEP-2 tokeni, asi ikozvino Binance achiri kutsigira ERC-20 tokens uye vashandisi vachiri kukwanisa kuashandura iwo kuva BEP- tokeni.2, kunyangwe isiri yakareba zvakare kubvisa ERC-20 tokeni.
Binance's Blockchain zvakare inoshanduka-shanduka: inogadzira matsva matsva ekushambadzira zvinhu zviripo, kutumira, kugamuchira, mint kana kupisa, kupisa kana kuvhura zviratidzo.
Iwe unogona zvakare kutarisa iyo DEX musika yekusimbisa mutengo uye musika zviitiko zveimwe zvinhu, kuongorora nhoroondo yekutengesa uye mabhuroko pane blockchain, kuburikidza neBinance Chain Explorer.
Pasina kutaura kuti iwe unogona zvakare kukomba yangu imwe yeBinance Chain dhata kuburikidza yakazara node API, gadzira maturusi uye zvinoshandiswa kubatsira vashandisi kushandisa iyo Binance Chain uye Binance DEX uye, zvechokwadi, kutumira uye kugamuchira zviratidzo zveBNB.
Iyo Binance Chain inoshandisa yakagadziridzwa vhezheni yeTendermint BFT kubvumirana. Tendermint yakagadzirirwa kushandiswa mu Cosmos network uye inoshandisa modular akitekicha kuzadzisa akati wandei zvibodzwa, kusanganisira kupihwa kwemasaiti uye kubvumirana mazinga echa blockchain, sekunge yaive chikuva panogona kuvakwa mashandisirwo akasiyana emitemo.
Zvinangwa zvikuru zvekugadzirwa kweBinance Chain ndezvi:
Hapana kuchengetwa kwemari: vatengesi vanochengetedza kudzora kwavo kiyi dzakavanzika uye nemari yavo.
Kuita kwepamusoro: yakaderera latency, yakakwira throughput (iyo chaiyo yakayerwa bandwidth) kune hombe mushandisi base uye yakakwira liquidity kutengesa. Chinangwa chenguva dzesekondi rimwe pachivara chimwe, uine 1 simbiso ye kuguma (iyo vimbiso yekuti izvo zvekushambadzira hazvingashandurwe).
Yakaderera mutengo: zvese mumakomisheni uye nemutengo wemari.
Zvakareruka mushandisi ruzivo: ane hushamwari saBinance.com.
Kutengeserana kwakanaka: kudzora kumberi-kumhanya zvakanyanya sezvinobvira.
Ichinjika: inokwanisa kukudziridza inoramba ichivandudzika yetekinoroji, zvivakwa uye mazano.
Hazvina kushata kubvunza kuti Binance Coin ndeyei, sezvo isiri mari. Sechiratidzo chinoshandiswa papuratifomu yeBinance, ine chinangwa chakakosha kwazvo. Rangarira kuti Binance inobhadharisa mari yekutengesa pane zvese zvaunoita.
Ko zvakamira sei kubhadhara mari yekutenga? NeBinance Coin iwe unogona, sezvo izvi zviri izvo zvinoshandiswa, kubhadhara makomisheni pane iyo Binance exchange.
Panzvimbo pekubhadhara $ 1 mubhadharo pamadhora ese chiuru aunotengesa (ayo anogona chaizvo kuwedzera uye ave mari isingafungidzike yevatengesi vanoshanda), unogona kungoshandisa mari dzeBinance kuvhara mari. Izvi zvinoita kuti Binance Coins ibatsire zvakanyanya uye inokosha kune vatengesi pane iyo Binance exchange.
Hezvino chaizvo zvazvinoshanda: Binance inoderedza mari yekutengesa kune avo vanoshuvira kushandisa Binance mari pakutengesa, kwemakore mashanu ekutanga. Uye kune komisheni system zvishoma nezvishoma mumatope chikero, saka mugore rekutanga unogona kuwana 50% dhisikaundi pamakomisheni ako uchishandisa Binance Coin.
Discount pamari yekutengesa yevanobata BNB. Kwayaka: Binance
Kubviswa kwacho kunoitwa nehafu gore rega rega, saka mugore rechipiri kubvisirwa i25%, mugore rechitatu iri 12,5%, mugore rechina iri 6,75% uye mugore rechishanu uye rapfuura dhisikaundi inobviswa.
Iyi dhisikaundi inoverengwa otomatiki uye inobviswa kana uine maBinance mari mune yako chikwama chikwama. Kana iwe usiri kuda kushandisa yako Binance mari kuvhara mari, iwe unogona zvakare kudzima zviri nyore chimiro ichi.
Asi…. asi kana kushomeka kuchiramba kuderera, chiratidzo chichava chisina kukosha pakupedzisira?
Sezvo vanhu vazhinji uye vazhinji vachikwezverwa kuchinjana kweBinance ivo vanounza huwandu nekukosha kune iyo mari, asi ivo vavaki veBinance vakawanawo imwe mhinduro yekudzivirira kukosha kwechiratidzo kuderera.
Chikamu chega chega vanotora makumi maviri muzana ezvavanowana kubva kumakomisheni voishandisa kutenga mari uye "kuipisa" kana kuiparadza.
Kupisa uku kwatoitika ka14, kekupedzisira kupisa kwakaitika muna Ndira 19, 2021, uye yaive yepamusoro soro yakambonyorwa, uko mamirioni 3,6 ematanho eBNB akaparadzwa. Yechipiri pakukura yaive muna Kubvumbi 15, 2018, apo Binance akapisa 2.220.314 XNUMX XNUMX BNB.
Nekutora mari yesimbi kubva mukutenderera, Binance inoita kuti masara emari akoshe zvakanyanya. Izvi zvicharamba zvichiitika kusvikira hafu yemari yemari, kana 100 miriyoni BNB, yaparadzwa.
Nekuongorora iyo BNB chati iwe uchaona kuti mutengo wemari unowedzera pese panotsva (kunze kwekutanga nguva, nekuti zvaisazivikanwa kuti ichauya).
Binance anopemberera kupisa kwechisere. Kwayaka: Binance Blog
Iyo Launchpad ndechimwe chinonakidza chikumbiro chakatangwa naBinance nguva pfupi yadarika. Ichi chiratidzo chekuburitsa chikuva ndiyo imwe nzira yaBinance kune Etheruem ICO. Izvo zvinobvumidza mapurojekiti matsva kuburitsa iwo matokoni zvakananga paLaunchpad.
Izvi zvakakoshawo zvakanyanya kuBinance Coin (BNB) sezvo ichizoshandiswa sechiratidzo chemuno mune nyaya. Kungofanana neICOs dzakasimudza ETH mukutengesa kwakatsigirwa neEthereum, BNB ichachinjaniswa nechiratidzo chakapihwa chirongwa chekutsvaga mari.
Maitiro aya akatove akashandiswa chaizvo neBitTorrent Token (BTT). Iko kudiwa kwaive kwakasimba zvekuti kutengesa kwese kwakapedzwa mune isingasviki maminetsi makumi maviri. Paive zvakare nekukwira kwazvino mumutengo weBNB pazvakazivikanwa kuti chimwe chirongwa chingave chiri kushandisa Launchpad kuburitsa ma tokeni ayo: iyo Fetch.ai chirongwa. Uku ndiko kumwe kusimbisa kwekuti chiitiko chakakomberedza Launchpad chinogona kukwidza kudiwa kweBNB mari: sezvo vazhinji uye vashandisi vaida kuisa maoko avo paBNB kuti vazoita mari muFetch.ai, vakaramba vachitenga BNB kuti vadaro.
Kunyangwe Binance iri huru yepakati kuchinjana, ivo vakagamuchira uye vakazadzisa chikumbiro chevatengesi chekuchinjisa. Panyaya iyi vakavhura yavo Binance DEX.
Kana iwe usati waziva parizvino, chinzvimbo chakatemwa (DEX) imari yekutsinhana ye cryptocurrency inobvumira vezera-kune-vezera kutengesa pakati pevatori vechikamu. Izvo hazvidi kuti utumire mari yedhijitari pachikwama pane yekuchinjana, uye isa odha.
Zvakanakira kushandisa Binance DEX. Kwayaka: Binance.org
Binance DEX ndiyo mhinduro yaBinance kumubvunzo uyu.
Iyo yaive yakavakirwa pamusoro peBinance Chain uye yechinyakare nhumbi iyo inopa masimba kuchinjanisa zviri pachena chiratidzo cheBNB. Zvimwe zvezvimwe zvinhu zveBinance DEX zvinosanganisira kugona ku:
kuburitsa matsva matsva
tumira zviratidzo kune vamwe vashandisi zvakananga paDEX
kupisa zviratidzo sezvazvinodiwa
freeze mamwe ma tokeni uye nyungudika gare gare
taura mutsva wekutengesa mapara
TENGA BNB PASI DEX BINANCE
Kubva nhasi, Kurume 2021, BNB iri yechitatu cryptocurrency chikuru nemusika cap ine cap yemusika ye $ 41,53 bhiriyoni. Iyo-yenguva-dzese yakaderera ye $ 0,096109 yemari yakaitika nguva refu mushure mekumisikidzwa kwayo muna Nyamavhuvhu 1, 2017. Iyo-yenguva-yepamusoro yakanyanya kuve ichangopfuura, neBNB ichirova $ 333 muna Kukadzi 20. gore. Kwete zvakaipa kune avo vaitenda mumari.
BNB mutengo unoshanda. Verenga: coinmarketcap
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti iyo BNB's mutengo dynamics akasiyana zvakanyanya kubva kune vamwe vazhinji ari Altcom nemari yakafanana yemari. Chekutanga pane zvese zvinofanirwa kutariswa kuti kuramba uchipisa mari (kupisa, kuparadza) kuri kudzikira kupihwa (mupfungwa ye kuwanikwa) yeBNB pamusika. Uye saka kukwira kwekudiwa ..
Izvi zvinhu zviviri ndizvo chikonzero nei BNB yanga isingachanyanyo simba pamusoro pemakore kupfuura mimwe mari. Uyezve, zvagara zviri mukufarira kwaBinance kuve nemari yakagadzika yemuno yekushandisa sevatengesi. Izvo zvakati, ivo vachangobva kuburitsa yavo vhezheni yavo fiat solidcoins - ngatitaurei nezve Binance USD uye Binance GBP solidcoins.
Takazviona pane coinmarketcap: iro vhoriyamu uye kushomeka kweBinance Coin (BNB) yakanyanya kukwirira. Saizvozvowo, yakawanda yeiyi vhoriyamu inoitika paBinance kuburikidza neiyo Tether (USDT) uye Bitcoin vaviri vaviri. Nekudaro, BNB yakanyorwawo pane kumwe kuchinjana kunopa kuwanda uye mitengo iri nani, senge P2PB2B, Coinsbit, MXC, nezvimwe.
BNBs dzinochengetwa muchikwama (chikwama) senge chero imwe cryptocurrency. Pakutanga vaigona kuchengetwa mune chero ERC-20 chikwama chinowirirana, asi kubva muna Kubvumbi 2019 chinja kuenda ku mainnet uye BEP-2 tokeni, chikwama chinowirirana cheBEP-2 chinodiwa.
Neraki, kune akawanda mapotifoliyo anotsigira BNB. Kana iwe uchida kuchengetedzwa kwakanyanya iwe unogona kusarudza chikwama chehardware senge Ledger kana Trezor. Kana iwe uchida homwe mbozhanhare iwe unogona kushandisa Coinomi, BRD, Trust Wallet kana Atomic Wallet. Jaxx Liberty zvakare inotsigira BNB, sezvinoita mashoma emamwe mawallet.
Tenga BINANCE COIN (BNB)
Sezvo Binance Chain iri rakavhurika sosi purojekiti isu tinokwanisa kutarisa zvakananga mumakodhi avo ekuchengetera kuti uwane zano rakanaka rezvibvumirano nezvinoitika zvinoitika.
Code inoita (iyo kodhi yekuvandudza matanda) iri bharometer yakakura yekutarisa chaizvo kuti yakawanda sei protocol-chikamu basa riri kuitwa. Aya ndiwo mabasa anoshanda muBinance Chain paGitHub mumakore matatu apfuura.
Code Kuzvipira binance-cheni / maHTML-saiti. Kwayedza GitHub
Inotaridzika senge yakanaka inoshanda ecosystem.
Chimwe chinhu chakakosha kucherechedza mashandiro anoita Binance Evolution Proposal (BEP) repo inoratidzwa pazasi iri.
I BEP iwo akaenzana naBinance Chain akaenzana neBitcoin Improvement Proposals uye ndizvo zvimwe zvezvinhu izvo nharaunda yaungade kuona ichiitwa.
Kune zviuru zvemazana zveBEs ari kumusoro kuti utarisire mberi. Ehezve, yakafara BNB ecosystem zvakare ine yakajeka robhoti mugwagwa wezviitwa. Ngatitarisei mamwe acho.
Binance Coin yaive isingori chiratidzo chakashandiswa kubhadhara mari dzekutengesa pazvakavepo, kunyangwe vamwe vachipokana kuti fungidziro pamisika yemari yakavhurika inoiita mari yedhijitari pachayo.
Izvi hazvingagare zvakadaro, zvakadaro, sezvo timu yeBinance inoronga kuwedzera zvakanyanya chiyero chekushandiswa kweBNB mari. Isu tinodawo izvi zvakanyanya tichifunga kuti sezvo mutengo weBNB uri kuramba uchikwira, uye nekuti Binance iri kukura mushandisi base inoda kushandisa iyo mari kuchengetedza pamari yekutengesa.
Iyo Binance Coin inogona kare kushandiswa kuisa mari muICOs yakachengetwa papuratifomu yeBinance Launchpad, iyo inopa varidzi veBNB nzira yekuita kudzoka pamari yavo. Aya maICO akasanganisira Chingwa, BitTorrent, Elrond, WINk, Kava, uye akati wandei emamwe blockchain mapurojekiti. Mari dzeBinance Launchpad dzeBNB dzakabudirira zvakanyanya kusvika pari zvino, izvo zvinopa chiratidzo cheBNB mukana wakawedzerwa.
Zvirongwa zvinoshandisa Binance Coin
Zvinoenderana neichi chirevo, sezvo misika yakawanda uye yakadzika inobvuma kutengesa mari itsva, uchaona kuwedzera kwekuda kweBNB kuvapa simba.
Parizvino kumwe kushandiswa kweBNB kubhadhara mari yekufambisa nevatengesi vakasarudzwa muAustralia, bhara kiredhiti kadhi reCrypto.com, tenga zvipo chaipo papuratifomu yeMithril, ubhadhare chero chinhu kubva kuzvitoro zvavanoshandisa. XPOS PundiX system uye zvimwe zvakawanda. anoshandisa. Chokwadi, mazhinji eaya akasungirirwa kune mapuratifomu akasarudzika, asi sekushandisa kuri kuwedzera, iyo ecnstem ecosystem ichaenderera ichikura futi.
Sezvo Binance ichiramba ichikura uye ichiwedzera maficha, zvingangove chokwadi kuti huwandu hwezvinhu zvinogona kuitwa nemari dzeBinance zvichawedzera.
Izvo hazvifanirwe kukanganikwa kuti zvave kutokwanisika kutengesa neBNB seyekufungidzira, kuyedza kupinda nemutengo wakaderera uye wotengesa chiratidzo pamutengo wepamusoro, sekuwanda kuri kuita vazhinji! Chero ani akatanga chinguva chakapfuura akaona mari yakawanda. Ngwarira kwazvo kupinda izvozvi kuti chidimbu chakareba.
Iko hakuna kuramba kuti ramangwana remari yeBinance rakabatana zvakanyanya nekuita kwaBinance mune yayo Shanduko fomu. Nepo Binance iri kudzima zvishoma nezvishoma mutero wekutengesa kuburikidza nekushandisa kweBinance Coin, iri kutsvagawo dzimwe nzira dzekuita kuti mari yacho inyanye kukosha.
Senge kupisa, kutsva, kuparadza kugoverwa kwemari uye kugadzira iyo yakatemerwa Exchange iyo inoshandisa Binance mari semari yayo yemuno. Ramangwana rinoshandisa BNBs rinozoita kuti riwedzere kubatsira uye kutyaira kudiwa kwemari.
Ehezve, mukana wekukosha kwekukosha mumari yeBinance zvinoenderana nekubudirira kwaBinance seShanduko. Binance haisi kuwana budiriro, iri kuisimbisa.
4.4 kubva pa5 nyeredzi(1597)
49,90 € (kubvira 02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Rumwe ruzivoUye vari pasi pekuchinja. Nyaya ipi zvayo panyaya iyi inowanika pa Amazon.com, sezvinoshanda panguva yekutenga.)
4.0 kubva pa5 nyeredzi(200)
29,90 € (kubvira 02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Rumwe ruzivoUye vari pasi pekuchinja. Nyaya ipi zvayo panyaya iyi inowanika pa Amazon.com, sezvinoshanda panguva yekutenga.)
4.1 kubva pa5 nyeredzi(1525)
2,99 € (kubvira 02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Rumwe ruzivoUye vari pasi pekuchinja. Nyaya ipi zvayo panyaya iyi inowanika pa Amazon.com, sezvinoshanda panguva yekutenga.)
6,39 € (kubvira 02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Rumwe ruzivoUye vari pasi pekuchinja. Nyaya ipi zvayo panyaya iyi inowanika pa Amazon.com, sezvinoshanda panguva yekutenga.)
61,99 € (kubvira 02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Rumwe ruzivoUye vari pasi pekuchinja. Nyaya ipi zvayo panyaya iyi inowanika pa Amazon.com, sezvinoshanda panguva yekutenga.)
Nyaya yapfuuraMargin Trading (ine LEVA) inoitwa sei paBinance?
Nyaya inoteveraDiscount pane Binance fizi
Ndeipi iri yepamusoro purogiramu yekutenga mari yemadhora?
Margin Trading (ine LEVA) inoitwa sei paBinance?